Diyaarad Dagaal oo si farsameysan Loogu soo riday Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 30, 2020 1,597 0
Ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa si farsameysan waxay ugu guuleysteen iney dhulka soo dhigaan diyaarad milliteri oo ay leeyihiin ciidamada Maraykanka ee duulaanka ku jooga dalkaas.
Diyaaradda ay ciidamada Imaaradu soo rideen waxaa nooceeda lagu sheegay E-11A, waana diyaarad weyn oo qaada gantaallo cul culus iyo xitaa ciidamada milliteriga Maraykanka.
Afhayeenka Imaarada islaamiga Dabiixullaahil Mujaahid oo war kooban soo saaray wuxuu shaaca ka qaaday in diyaaradda ay soo rideen ciidamada Imaarada islaamiga iyagoo adeegsanayo taktiik gaar ah, wuxuuna sheegay iney dhinteen dhamaan askartii saarneyd.
Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in diyaaradda ay si lama filaan ah ugu soo dhacday deegaano katirsan gobolka Qazni oo badankiis ay maamusho Imaarada islaamiga, waxaana markaas kadib goobta ay ku dhacday si deg deg ah u gaaray ciidamada Mujaahidiinta.
Ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa isku dayay iney soo gaaraan goobta ay diyaaradda kusoo dhacday, hase ahaate waxay la kulmeen weerar dhabagal ah, waxaana sarkaal u hadlay xukuumadda Kaabul uu shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay ku guul dareysteen iney gaaraan goobta ay kusoo dhacday diyaaradda.
Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxay shaacisay in ugu yaraan lix ruux ay ku dhinteen soo ridista diyaaradda, ayna hadda gacanta ku hayaan, wuxuuna sheegay in diyaaradda xilliga dhulka lasoo dhigayay ku howlaneyd howlo basaasnimo.
Dhinaca dowladda Maraykanka waxay xaqiijisay in diyaarad ay leeyihiin milliteriga Maraykanka ku dhacday gobolka Qazni ee Afqaanistaan, waxaana ay sheegtay iney wadaan baaritaanno ay ku ogaanayaan waxa dhaliyay soo dhicista diyaaradda.
Afhayeen u hadlay ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in diyaaradda ay dhulka ku dhacday daqiiqado un kadib markii ay ka duushey saldhig milliteri oo ay ciidamada Maraykanka ku leeyihiin gobolka Qazni.
Xilli uu Maraykanku wado ka bixitaanka dalka Afqaanistaan sida ay shaacisay wasaaradda dagaalka ee Maraykanka ayaa hadana waxaa weli qubanaya dhiiga ciidamada Ameerikaanka ah ee duulaanka gardarada ah ku qaaday wadanka Afqaanistaan sanadkii 2001-da.